Abantu abaninzi bayazi intlungu ehlangene. Ngokuqhelekileyo intlungu iqhutyana kwi-joint hip, intlungu kwi-jointbow, intlungu ehlangeneyo, intlungu emadolweni. Ubuhlungu kwiindawo ezixhamlayo zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zizinzi. Isizathu sentlungu singaba utshintsho olunexesha elidala, ukuphuka, ukunyusa uxinzelelo kwi-joint, ukuxhatshazwa, izifo ezithathelwanayo okanye i-arthritis. I-arthritis yilexesha eliqhelekileyo kwizifo eziyi-100. Intlungu ehlangeneyo, zokupheka kwabantu, sifunda kule ncwadi. Ezi ntlungu ezinzima kumalungu angapheliswa sele zivavanywa ngamayeza omntu. Emva koko, usebenzo luya kwenziwa rhoqo, ukuba akukho nto inceda.
Kalanchoe. Intyatyambo ye-Kalanchoe ishukunyiswa kwisiqhumiso somzimba, sithatha isigamu sesitha se-mass reception kwaye sigcwalisa i-litre ye-vodka, sifaka iintsuku ezintathu okanye iintsuku ezi-5. Kwaye siyibhuqa le mpilisi kwiindawo ezipholileyo. Unokutshintsha inani.
Ikhekhe nge yogurt. Iqhekeza elincinci elincinci, ivuselele i-kefir size sifumane ubunzima obufanayo. Ubungakanani be kefir kunye nekhefu kuthathwa ngokukhawuleza, umxube wokuxinwa kufuneka ufanane nochumisi omuncu kwaye ungasasazeka. Sifake i-cellophane kwaye sisebenzise, ​​kwindawo ephosakeleyo, njenge-compress. Gqungqa ibhola elifudumeleyo okanye i-handkerchief.
Buttercup kwiintlungu emadolweni. Esi sityalo sinetyhefu. Thatha i-3 okanye 4 izityalo ngaphandle kweengcambu uze uphuze 1 iglasi yamanzi abilayo. Umhluzi uthele kwisitya, ungeze amanzi, ukuze kubekho iilitha ezingama-5. Phula iinyawo zakho ngelixa amanzi atshisa, qa, njengoko unako ukunyamezela. Kule ngxowanxu siza kumisa umgqomo kwaye sisebenzise emadolweni. Senza le nqubo ubusuku, de kube intlungu edolo.
Ukunquma izilingo zepine kwintlungu emadolweni. Kwipuphu yase-litre etafuleni ezintathu, gcwalisa izandla ezi-2 zeedaliti uze uphulule phezulu kumanzi abandayo. 5 imizuzu yokubilisa, kwaye ugxininise iiyure ezingama-4, uze ubenze uze ufake efrijini. Siphuza yonke imini endaweni yamanzi. Kancinci intlungu iphela.
Ukunciphisa intlanzi. Thatha intlanzi eluhlaza (naluphi na), susa amathambo, kunye neqhekeza ubukhulu besundu buya kusebenza kwiindawo ezibuhlungu. Gubungela nge-polyethylene, uhlanganiswe kwisikratho eshushu. Ngentsasa siya kutshintsha i-compress kwaye siyibophe ngesiqhwa eshushu. Ngoko senza amaxesha angama-7, emva kwexesha lesi-2 okanye kathathu siza kuphinda.
I-egg emhlophe, isardadi, i-camphor. Sithatha iqanda elingu-100 elimhlophe (iqanda elimhlophe lilinganisa igrama ezingama-35), i-50 ml yotywala, i-50 gram ye powderard, i-50 grams ye-camphor. I-Soluble in alcohol alcohol campus, emva kweevenard. Ngokwahlukileyo, siya kuthatha iprotheni ephuziweyo. Sidibanisa iimbumba ezimbini kwaye ngaphambi kokulala siya kudibanisa abagulayo ebusuku, tibophe ngento ethile yoboya. I-ointment igcinwa kwifriji.
Common burdock. Xa i-burdock eneminyaka emibili evuthwayo, i-autumn siza kulungiselela imbewu evuthiweyo kwaye senze oku kulandelayo: 30 okanye 40 grams yembewu eyomileyo iya kugcwaliswa ngesigamu sesitha se-alcohol okanye i-vodka. Sinyanzelisa iiveki ezimbini endaweni emnyama, zivame ukugungqiswa. Emva koko.
Ukususela kweso sakhiwo senza inkxalabo ye-osteochondrosis, i-arthritis, i-arthrosis, i-back, i-joints njalonjalo. Sithatha i-gauze kwiingqimba ezi-3, sizithengisa ngokunyusa, sibeka kwindawo ephosakeleyo. Emva koko wimboze ngeboya, uze ungasebenzisi i-polyethylene.
Lilac. Thatha iibhola ezintathu ze-lilac ezimhlophe, gcwalisa isiqingatha ilitha lamanzi abilayo, upholile kwaye ubeke iintsuku ezintathu kwiqrijini. Emva koko uphonsa i-lilac uphuze le manzi, imizuzu engama-30 ngaphambi kokutya, i-1 isipuni kathathu ngosuku, iintsuku ezingama-45. Kwaye ukususela kwixesha leentyantyambo ze-lilac lifutshane kakhulu, zomisa i-lilac ukusetyenziswa kwangomso. Sibeka iibrashi ezintathu kwaye siwafaka ephepheni. Kwisitya segesi asiyikuyibeka, i-liquid iya kuba yinto engenakonakala kwaye iyancipha.
Sampula iSabelnik. Senza i-tincture ngolu hlobo lulandelayo: gcwalisa i-1/3 yelinen yejezi nge-rhizome ephosiweyo yecala elixhambileyo, lizalise nge-vodka, gxininisa kwindawo emnyama iintsuku ezingama-21. Emva koko unxilise kwaye uphuze ngaphambi kokutya 1 isipuni kathathu ngosuku. Ngobusuku sineengxaki. I-Tincture inceda kwizifo zesetyhini, ngeentlungu emgodini nakumalunga.
Iqabunga laBa. 300 ml amanzi kunye no-5 amagremu amaqabunga, ubilise imizuzu emi-5 okanye emi-6. Sifaka kwi-thermo ama-3 okanye ama-4 iiyure, sinyanise uphinde uphuze emini ngemini ye-sips encinci. Emva kweentsuku ezimbini zokuthabatha i-1 isipuni ngosuku, kodwa asisayi kuphinda sithathe ikhefu iintsuku ezi-7 siphinde sithathe ukungena. Emva kweenyanga ezintandathu, ikhosi iya kuphinda iphindwe. Kubalulekile ukulandela iresiphi ngqo.
I-Eucalyptus, calendula kunye ne-menovazine. Sithenga kwi-tincture ye-pharmacy ye-eucalyptus, calendula, i-menovazine, exutywe ngamanqanaba afanayo, engeza ama-50 gram ye-vodka. Siyibhuqa indawo yokugula ubusuku, ngoko siza kufaka indawo ezigulayo. Kubonakala ngathi silele kwisitofu saseRashiya. Ayiyi kutshisa isikhumba. Siyibhuqa yonke imihla size sifike, ukufudumala kumnandi. Ngobushushu, siza kuhlamba iinyawo zethu, sifake iisokisi size silale phantsi kwengubo.
Ukuphelisa kwi-eggshell kunye nobisi obomuncu - iresiphi yonyango lomntu
Thatha amanani alinganayo ubisi olunomso okanye ubisi oluboyiweyo ukusuka kubisi lonke, kodwa kungabikho kefir, kunye neqanda leqanda elikhulu, kunye ne-pound ibe ngumgubo. Sidibanisa ubisi oludibeneyo kunye ne-shell shell. I-Kashitsu igqoke i-rag kwaye ibeke phezu kweyure kwindawo ephosakeleyo, ngaphezulu kwefilimu ehlanganiswe kunye neendwangu ezifudumeleyo. Ngaba unyanzelekile iintsuku ezingama-5, ukuba emva koko akukho phuculo, emva kweentsuku ezingama-5 zithatha ikhefu, kwaye iintsuku ezingama-5 zinyanzelise, emva kweentsuku ezingama-5 zithinte ikhefu uze ufike. Ukunyanzelisa ngaphambi kokulala. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
Aloe vera kwiintlungu ezidibeneyo
Izithako: thatha igramu ezili-100 zobuncilisi obusulwayo, igramu ezili-100 zeoli yeVaseline, i-100 gram ye-ammonia, i-100 gram ye-camphor, i-100 gram ye-turpentine, i-100 gram ye-agave (i-aloe ibineminyaka emithathu ubudala, iintsuku ezingama-5 ngaphambi kokusika, ungayi manzi), 1 okanye 2 ama-ampoule amakhulu novocaine. Iityuwa zonke izithako ebhodini elimnyama, ulibeke iintsuku ezingama-5 endaweni epholileyo, kungekhona kwifriji. 2 okanye amaxesha amathathu ngosuku. Iyeza lilungele. Ukuze singatshisi yonke into, siza kuthululela amanye amayeza kwibhotile ngesibindi esiqinile. Ngaphambi koku, siyawugubha ngamandla, uze udibanise ngomzuzu owodwa okanye emi-2. Ngaphambi kokusetyenziswa, tshisa kancane emanzini ashushu, kodwa kungekhona kwisitofu. Gubha ngamandla. Ukufudumala umxube entendeni, gcwalisa ibhotile ukwenzela ukuba amalungiselelo awaphuluki. Emva koko siyakubhuqa iindawo ezibuhlungu ezintendeni, cinezela ngokumelana nomzimba, kunye nomgca wesandla, ukuze ukushisa kunye nabagulayo, kunye nezandla zibe. Emva kokuxubha, kufuneka uhlale embhedeni. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
Razirka ukusuka ku-analgin, i-valerian, iodode, i-cologne, ukwenzela unyango lweentlungu ezidibeneyo
Iyeza zonyango zisebenzisa isisombululo esisebenzayo sokonyango kwentlungu, kuluhlu olunjalo: uthathe amacwecwe e-analgin aphihliweyo a-6, i-vial 1 ye-valerian, i-vial 1 ye-iodine, ibhotile e-1 ye-cologne kathathu. Yonke inxibelelwano, faka kwindawo emnyama iintsuku ezi-5. Siyibhinqa isilwanyana sokugula ubusuku kwaye siyifake.
Umyalelo wendoda eqinisekisiweyo yonyango lwamalungu kunye newayini kwi-elecampane
Kwisitya esingamahlanu-litre sizalisa iincinci ezixinzekileyo ze-elecampane, engeza i-100 okanye i-120 amagremu emvubelo kunye no-honey. Konke oku siza kuzalisa ngamanzi abanda abilisiwe, vala ingcambu ngesiqhekeza kwaye uyibophe ngengubo eninzi. Iiveki ezi-2 zifakwe kwindawo efudumeleyo, kungekufutshane nebhetri. Xa ukuvumba kuphelile, siya kutyinga iwayini kwaye sikufake kwisiqandisini. Phuza i-50 gram ngesigamu seyure ngaphambi kokutya 3 okanye amaxesha amane ngosuku. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
Iqabunga laseBay lokunyanga kwamalungu
Iyeza lendabuko ixesha elide lisebenzisa i-leaf leaf ukuze unyango lweentlungu. Siza kuhlamba ama-50 amagremu amaqabunga e-laurel, uhlanza ngamanzi abandayo. Faka amaqabunga kwisiqwenga esincinci esityebileyo uze usigcwalise ngama-250 grams yamanzi abandayo. Sifaka ipaka emlilweni omncinci kwaye uyibilise. I-Fluid icutshungulwa, ichithelwa kwiingxenye ezine ezilinganayo, umzekelo, kwiiglasi. Siphuza iglasi enye ngosuku nge-sips encinci, ungagxinyi, uze uhlanyele njenge-candy, uze uginye. Siphula iintsuku ezi-4 ngelo xesha, nangaliphi na ixesha lemihla, kodwa iglasi igxininiswa yonke imini. Unako kwaye emva kokutya, kwaye ngaphambi kokutya. Ikhosi yesibini iya kuphinda iphindwe emva kweminyaka eyi-1 okanye 1.5. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
I-eggshell yokunyanga intlungu edibeneyo
Njengabafoli bezilwanyana, cebisa ukuba, xa uthatha iigobolondo zeqanda, kufuneka udibanise amaconsi ambalwa e-lemon, ngaphandle kobukho be-asidi, i-calcium ayixhasi. Sithatha i-teaspoon 1 yegobolondo yomhlaba kanye ngosuku. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
Amaqabane athatha i-agaric
Ukunyanga kwamalungu, amayeza omntu acetyisa ukuba aqoke iinqwelo ze-agarics ye-fly fly, zibeke ngokuqinileyo kwisitya kwaye uthele i-vodka. Unika ii-2 okanye iiveki ezi-3. Sisebenzisa ukuxubha indawo ezigulayo, kwiintlungu kwiigaments, amajoyina, ukuxinwa.
I-Fat yokunciphisa intlungu ngamalungu
Ngenxa yentlungu, kufuneka uhlambe ebusuku ngobunzima obuxhatshazwayo obunamafutha. Ubungakanani benkqubo enjalo iintsuku ezisixhenxe.
I-ointment e-homemade kwi-bhotela, umjunipha, i-laurel ukunciphisa intlungu kwi-joints
Thatha amaqabunga ama-laurel, izilingo zepine, iimjunipha kunye nebhotela kwi-6: 1: 12. Amagqabi atyhidiweyo ahlanjululwe ngeoli kwaye ahlambulule ngamalungu amanxeba. Sisebenzisa kwonyango intlungu.
I-chestnut, i-dandelion, i-lilac kwiintlungu emadolweni
Thatha i-jar-liter liter and add it in the same number of flowers of lilac blue, dandelion and flowers and chestnut. Siphalaza i-vodka size sibambelele kwindawo emnyama iiveki ezimbini. Ngaloo mngcipheko, sinokuphulukisa ngaphandle kwamadolo agulekileyo, ngenxa yoko sifaka iingubo kwi-tincture, uyibeke emadolweni, faka i-cellophane phezulu, uyibophe nge-rag. Ukunyanzeliswa kwenziwa ebusuku. Ukukrazula intlungu, kuya kubakho okwaneleyo 2.
Iklabishi yebhakabhaka kwizifo ezidibeneyo
Thatha isipuni se-1 se-khabichi brine, udibanise nekota yeglasi uze uphuze ixesha 1 ngosuku nangaliphi na ixesha. Siza kusela rhoqo imihla ngemihla. I-Brine ixhaphaza isifo, intlungu edibeneyo, i-arthritis.
Thatha i-50 ml ye-ammonia exutywe ne-25 ml ye-iodine, sifaka iintsuku ezi-3. Emva kweentsuku ezintathu kwi-tincture yongeza i-25 ml ye-iodine kunye nezinye i-50 ml ye-ammonia, sifaka iintsuku ezi-3. Emva koko wongeza 50 ml ye-ammonia. Kwaye ekupheleni kongeza 200 ml ye-tincture. Masiphakamise endaweni emnyama, thukuza rhoqo. I-tincture ikulungele xa ibala. Ngalesi siqulatho sibaxubusha amaqela achaphazelekayo kabini ngosuku, kwaye eso sifo siya kuphelisa.
Ngokuncediswa kwindlela zokupheka kwabantu, intlungu edibeneyo ingancitshiswa. Kodwa ukuze usebenzise le nto okanye loo myalelo, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho kuqala.
I-anatomy ye-genitalia yangaphandle kunye nesondo
Amanyango omntu okonyango lwe-melanosis
Ukukhonza ngokufanelekileyo ukutya nokusela
I-dessert yetshokolethi "Kwababini"
I-skating rink eMoscow: apho i-skate, evulekileyo, evulekileyo neyobusuku eMoscow 2016